İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar İhalesinin İptali İçin Başvuruda Bulundu | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulIMM, Haydarpaşa na Sirkeci Station Tender Application for Cancellation
ibb haydarpasa na sirkeci tinyere akwụkwọ maka kagbuo nro
Na oku nke Mayor Obodo Ekporo İmamoğlu nke Istanbul, ọtụtụ ndị ọka iwu gbara akwụkwọ na Administlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mpaghara maka kagbuo Hay Haypapaşa na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Sirkeci nke TCDD mere. Ndị ọka iwu gbara akwụkwọ na mkpesa ndị omekome na Publiclọ Ọrụ Ọhaneze maka Istanbul banyere mkpesa ndị ahụ.
Onye isi obodo Obodo isi obodo Istanbul Ekrem Imamoglu, nke ndị bi na Istanbul, bụ ebe ime mmụọ maka Istanbul, ”ebe a na-eme Haydarpasa na Sirkeci iji kpochapụ Obodo isi obodo Istanbul a. İmamoğlu kwuru na ya bu n’obi merie mpaghara ndị a ka e jiri mee ya maka ọdịbendị na nka na igbochi aghụghọ ọ bụla na Istanbul na ọ gaghị eso usoro a n’ụzọ nkịtị yana ọ chọrọ ka ndị chọrọ ịhụ nke a leba anya na nsonaazụ 23 June. Imamoglu gbara onye ọ bụla ume ka ọ rụọ ọrụ n'okwu a, na-eme ọtụtụ ndị ọka iwu, na-etinye akwụkwọ na Administlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nlekọta Obodo rịọrọ ka akagbuo nchapu a. Ndị ọka iwu tinyeziri mkpesa nke ndị omekome na Chieflọ Ọrụ Ọfịs Onye Ọchịchị gbasara ndị na-eme ebe ahụ.
GM MEAKA COMMINGAKA DING N'SLỌ EGO
TCDD, Haydarpaşa na Sirkeci, ihe dịka 29 puku square mita nke ebe nchekwa na steeti na-enweghị isi agaghị eji ya mee ihe omume azụmahịa X 4 ọnụego mgbazinye kwa ọnwa na October 30 puku pound dị nro. Zarlọ ọrụ Hezarfen Consulting Limited na consortium nke mejupụtara ụlọ ọrụ ntinye aka nke İB Kültür AŞ, İSBAK, Metro İstanbul na Medya AŞ bụ ndị mechara abịa. Njikota IMM nyere 100 puku kwa ọnwa na Hezarfen Consulting nyere 300 puku TL. Kọmitii dị nro kwuwapụtara na a ga-akpọ ndị otu ahụ ka ha gbaa izu n'ime ụbọchị 15. Na ngwụsị nke usoro 15 kwa ụbọchị, Tender Commission kwupụtara na enyere ụlọ ọrụ ahụ ihe nro ahụ maka ịgbazite 350 puku TL mgbe nzukọ nkwekọrịta ahụ kpọrọ naanị site na zerlọ Ọrụ Hazerfen. Ihe a rụpụtara bụ faksị IMA, onye akpọghị ya ka ya na ya kpaa nkata. Onye isi ala İBB Ekrem İmamoğlu kwuru na ya ga-agbaso usoro ahụ n'aha ndị Istanbul na ndị ọka iwu Istanbul niile nwere ike itinye aka na mkpesa ndị ọka iwu.
Ndị ọrụ na-akpọ oku IMAMOGLU
Ndị ọka iwu malitere usoro ikpe na nzukọ a nke Imamoglu taa rụrụ ụka na nro ahụ October 14 rụpụtara na-emegide ụkpụrụ iwu, nchịkwa ọha na usoro nchịkwa iji kwado ọdịmma ọha na ọdịmma nke Istanbul na 16 nde Istanbulites. Ndị ọka iwu nke IMM kwuru na TCDD mehiere nnukwu ihe ma dabere na ihe kpatara nkagbu na mkpesa ndị omempụ:
“TCDD bụ ụlọ ọrụ akụ na ụba nke steeti hiwere n'okpuru Iwu Iwu (Iwu Iwu Nke 233). Dịka Iwu Iwu a si dị, ọ nweghị ihe dị n’usoro nke General Accounting Iwu na Iwu Statezụta steeti yana nnyocha nke oflọikpe nke Akaụntụ.
n'ihi na ọ bụghị n'okpuru State Obi Iwu, TCDD mgbazinye contracts, agbala na ndabere nke kwuru na Iwu Iwu 'Republic of Turkey State Railways bụrụnụ ndị kwụ chịm Mgbazinye Regulation na Directorate General' a na-eme dabeere. Emere ebe dị nro maka ebe Haydarpaşa na Sirkeci na usoro usoro emechiri emechi akpọpụtara na Iwu ahụ. N'ime iwu ahụ, ihe dị iche iche gbasara usoro ndị ọzọ dị na ntanetị dị n'okpuru iwu na enwere ike iji usoro ịkpa nkata rụọ ọrụ ebe enweghị nseta nsonaazụ ma ọ bụ na enweghị ndị ọsụ ụzọ zuru ezu ', mana enweghị ohere dị otú a maka usoro Kapalı Closed Bid Usoro'. Usoro 40. N'okwu ahụ, olee ụdị mkpebi TCDD nwere ike ịme na njedebe nke usoro Kapalı Closed Tender bağlanmış, na enweghị ntanetị nke nro ahụ dịka usoro ahia ahụ. N'ihe banyere iwu nchịkwa, a ghọtara na enwere 'nkwarụ usoro dị ukwuu' ebe a. 4 Na ngwụcha nke nchapụta ahụ na Ọktọba, kọmitii ahụ mara ọkwa na a ga-akpọ ha maka nzukọ mkparịta ụka ya na Hezarfen Consultancy Limited Company na mmekorita azụmaahịa nke ndị otu IMM guzobere. Agbanyeghị, n’ụbọchị mkparịta ụka ahụ, ewezugala mmekọrịta dị na azụmahịa nke ndị mmekọ IOM site na nro ma nye ndị isi ahụ maka Hezarfen Danışmanlık Ltd.Şti. TCDD gwakwara ndi otu ndi OMA ka ha mee nkata. Nke a pụtara na Kọmishọna na - ahụ maka na Ndị mmekọ nke IMM na-ahụ na ha zuru oke maka ọnụ. Na nke a, ezughi oke nke mmekorita nke Ndi Mmekorita IMM putara na komputa a ga-aru ahia nke abuo na ahia mbu. N'ihe banyere Iwu Nchịkwa, nke a bụ nkwarụ nkwarụ ‘SUBJECT’. Enwere mkpebi nke Ndị isi obodo na nke a. ”
AKW CANKWỌ MAKA ANY AG NA-EME NIILE
2- N'ime mkpebi nke TCDD Tender Commission iji kpochapụ IMM Consortium, isi ihe ndị a bụ ihe kwesịrị ịrịba ama: - 'Ọ bụghị onye ọ bụla nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na nkwonkwo nyefere onwe ya' akwụkwọ ahụmịhe ọrụ ', -' Okwu 'jikọrọ ọnụ ma jikọta ọnụ' kama 'nkwonkwo na ụgwọ ọrụ nkwonkwo' edere na nkwekọrịta nke njikọ a. ', -' 19 nke Nkwekọrịta Njikọ. Edemede (c) nke ederede, usoro nke nkwekọrịta mmekorita, nkwekọrịta a ga-eme mgbe e nyere ya na akwụkwọ nrụpụta nkwupụta dị elu '.
Ihe ndia ato bu ndi ezighi ezi n'ihi ihe ato.
A- Onweghị ọrụ dị na nkwanye ugwu a. Ọchịchọ maka akwụkwọ ahụmịhe ọrụ dị iche bụ nkọwa nke komputa ahụ esighi na iwu ọ bụla. N'oge a, ozi ndị a dịkwa mkpa: Ọ bụ ezie na achọrọ asambodo ọrụ 4.000.000,00 TL na nkọwapụta, Kültür AŞ egosila 274.798.951,77 TL dị ka asambodo ahụmịhe ọrụ otu afọ gara aga. Mkpebi ị wepu ikike ịgbazite bụ iwu akwadoghị, dabere na ọrụ ịchọrọ asambodo ọrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ dịkwa mma: 38 nke TCDD Leverage Regulation. Dịka akụkọ ahụ si kwuo, 'emepe emeghe dị nro ma ọ bụrụ na ọ dị nro'. E mepere envelopu dị nro nke IMM na nro a na-eme na October 4 ebe ọ bụ na e lere akwụkwọ ndị ahụ ezuru. Kaosinadị, na nro nke abụọ nke 18 October, ekpebie ka ewepu ya. Nke a bụ omume iwu akwadoghị.
B- N’agbanyeghi na edewo ahịrịokwu nke nwere otu ihe ọ pụtara, ọ megidere iwu ‘HONESTY’ nke bụ otu n’ime usoro iwu dị nkenke. Edemede, na ịchọpụta na ịkọwa ụdị na nkwekọrịta nke nkwekọrịta, n'agbanyeghị okwu ejiri mee ihe na mberede ma ọ bụ iji zoo ezi ebumnuche, n'agbanyeghị agbanyeghị ma ọ bụ nke ga-agbadabere na iwu bağlanmış. C- Nkwekọrịta dị n'etiti ndị na-emekọrịta njikọ ga-ejikọ naanị ndị mmekọ. O nweghị ihe jikọrọ TCDD ndị ọzọ. Ya mere, echiche nke na nkwekọrịta dị elu karịa nke a ga-eme na TCDD yana akwụkwọ nro bụ enweghị usoro iwu. na-achịkwa nke ọma. Ndi oru nta akuko a mere ka nmekorita nke ndi nnochite anya ndi oru ya na ndi otu oru ha na ndi otu oru ha. Na mkparita uka ndi a, a ghaghi imebi ihe ocha ma meghee onu ohuru. Ọ bụrụ na imeghị ihe a bụ nkwarụ 'bụ usoro' dị ka Iwu Nchịkwa si dị.
3- Ka usoro nro ahụ na-aga n'ihu, Obodo Obodo Istanbul, 5216 / o Nke 7 / o nke Iwu Obodo gụpụtara 3 yana Iwu nke Mgbapụta nke Akụ A Na-agaghị Emetụta Ya na Ihe Mere Ahịrị na Ego. Dabere na edemede ahụ, e tinyela akwụkwọ na TCDD maka ịgbazinye ihe mgbazi site na usoro ịbanye na ya; Agbanyeghị, ajụrụ arịrịọ a. 5216 Iwu Nke Iwu Obodo Obodo 7. (o) ekenyela ọrụ nke ịchekwa akwa akụkọ ihe mere eme na ebe na ọrụ dị mkpa na usoro nke akụkọ obodo mepere emepe na Obodo Obodo. Nchedo nke ndị anaghị anwụ anwụ nwere ike ịdabere na obi Haydarpaşa na Sirkeci Railway Station, nke nwere asambodo akọwapụtara na Iwu ahụ, bụ ọrụ nke IM. Usoro nchịkwa maka imeghe ọnụ ụlọ mgbazinye megidere ụkpụrụ a bụ nke megidere iwu a, megidere 'mkpebi nnupụisi' a, a ga-etinye akwụkwọ ikpe n'ụlọ ikpe nchịkwa n'ebumnuche ịkwụsị ogbugbu ahụ.
AKW OKWỌ EGO NA-AKP. EGO
4- N’ime obi anụ ahụ, anyị jụrụ n ’akwụkwọ akụrụngwa nke 20.000.000,00 TL nke zarlọ Ọrụ Hezarfen Limited nyefere n’aka na ọ naghị eme ihe a chọrọ; agbanyeghị, enweghị nzaghachi sitere na nchịkwa nke TCDD nyere maka ngwepu a. Na mgbakwunye, ebe nyocha ngwa nke IMM Consortium zuru ezu, ebumnuche ruru eru anaghị etinye n'ọrụ. N’aka nke ozo, dika ekwuputara na mkpesa anyi; Ọ dịkwa mkpa na nchịkọta atụmatụ VAT nke zarlọ ọrụ Hezarfen Consultancy anaghị eburu atụmatụ ahụ na nkọwapụta; n'ihi na o kwesiri ịbụ na ịgbakọ ịgbakọ enweghị VAT. ”
AKW GKWỌ AKW AGKWỌ AKW AGKWỌ ND AG KWES AGRAIN INWETA
Na ngwụcha nke ngwa ha, ndị ọka iwu IMM mesiri ihe ndị a ike: “Ebumnuche nke ịmalite njikọ aka ọnụ bụ imezu ọnọdụ obi. Ya mere, ihe megidere ebumnuche nke njikọ aka na-atụ anya ka onye ọ bụla ga-enyefe akwụkwọ ọrụ ahụmịhe ọrụ. Ọzọkwa, nkwekọrịta mmekọrịta azụmaahịa, nke a na-ekwupụta dị ka ihe ziri ezi, edebanyela aka n'etiti ndị enyemaka nke obodo ahụ ma na-ejikọ naanị ndị ọzọ. Kọmịshụa nke kọmịshọn na ntuli aka na-emegide iwu nke ịkwụwa aka ọtọ. Maka ebumnuche ndị anyị kpọtụrụ aha, enwetara ikpe mbipụta abụọ ahụ maka nkwụsị nke ogbugbu na thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mkpegharị na Akpọrọla Onye Isi Ọchịchị na Anatolia mkpesa banyere ndị nhazi nke a.
Ntucha nke obi site na JCC Başkentray si na ụlọ ikpe ahụ laghachi 01 / 12 / 2013 Başkentray İhalesinin KİK Tarafından İptali Mahkemeden Döndü :TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2012'de ihalesi yapılan ancak 15 Mayıs'ta gelen itiraz üzerine Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından 15 Mayıs 2013…
Yenişehir Osmaneli Egwu Mgbapu Ozo nke Mbido Ogologo oge 08 / 10 / 2019 Aslında… Konuyu yakından takip edenler için hiç de sürpriz değil. O bakımdan, dün aktardığımız ihale iptali gelişmesi öngörülen bir sonuç kabul ediliyor. Konu şu: TCDD 3 Nisan 2018 günü Bursa-Osmaneli…
Antalya Municipality Light Rail System II. Ngalaba Antray etinyewo aka maka ịnyefe ọrụ ahụ na Ministry of Transport 11 / 12 / 2013 Antalya Municipality Light Rail System II. Oge Akara maka mbufe oru ngo nke Antray na Ministry of Transport: Mmepe na UDHB Railway na Mpekere Mgbakọ Antalya Obodo; Sistemụ Rail II. Ogbo (Antray)…
Haydarpaşa Solidarity: 'Haydarpaşa na Sirkeci Train Station Nyefe na IMM' 02 / 10 / 2019 Haydarpaşa na Haydarpaşa na Sirkeci Train Station maka mbufe Istanbul Metropolitan Munye kwuru nkwupụta ederede. Description; "Obodo isi obodo Istanbul, nyere na Haydarpaşa na Sirkeci Station ejiri maka ebumnuche na nke ọha
Ntụle na-atụ egwu: A ga-ewere ọrụ nhicha na disinfection (Haydarpaşa, Sirkeci, Halkalı gar) 27 / 01 / 2015 A ga-ewere ọrụ nhicha na disinfection ka General Directorate of State Railways (TCDD) 1. Onye nchịkwa ihe nchịkọta akụkọ Haydarpaşa, Sirkeci, Halkalı Nhicha akwa, ọgwụ na mkpochapu nke 23 / 01 / 03 Tden na ndị ọrụ 2015,,
Ntucha nke obi site na JCC Başkentray si na ụlọ ikpe ahụ laghachi
Antalya Municipality Light Rail System II. Ngalaba Antray etinyewo aka maka ịnyefe ọrụ ahụ na Ministry of Transport
Haydarpaşa Solidarity: 'Haydarpaşa na Sirkeci Train Station Nyefe na IMM'
Ntụle na-atụ egwu: A ga-ewere ọrụ nhicha na disinfection (Haydarpaşa, Sirkeci, Halkalı gar)
Üçkuyular - Narlıdere Engineering School, nke a na-ezubere ka e wuo ya, ga-etinye aka na İzmir Metropolitan Municipality Ministry maka ntụgharị ụzọ ntanetị
TCDD Bilecik na Bozüyük Gar Atụmatụ mkparịta ụka dị nchịkọta
Ankara Gar n'ihu Haydarpaşa Gar